Kpido: covid-19 | Martech Zone
Tredị ahịa: Nbili nke Onye Nnọchiteanya na Onye Okike Oge
2020 gbanwere ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta na ndụ ndị ahịa. Ọ ghọrọ ọnye ndu nye ndị enyi, ndị ezinaụlọ na ndị otu ibe, ọgbakọ maka ndọrọndọrọ ọchịchị na ebe ana -eche ihe omume na ndokwa. Mgbanwe ndị ahụ tọrọ ntọala maka ọnọdụ ndị ga-agbanwe ụwa mgbasa ozi mgbasa ozi na 2021 na gafere, ebe itinye ikike nke ndị nnọchi anya ika ga-emetụta oge ọhụụ nke ahịa dijitalụ. Gụọ maka nghọta na
Mgbanwe Dijitalụ na Mkpa nke Ijikọta Ọhụụ Atụmatụ
Tuesday, February 16, 2021 Tuesday, February 16, 2021 Carter Hallett
Otu n'ime ọla ọcha ole na ole nke nsogbu COVID-19 maka ụlọ ọrụ abụrụla ngwangwa dị mkpa nke mgbanwe dijitalụ, nwetara na 2020 site na 65% nke ụlọ ọrụ dịka Gartner si kwuo. Ọ na-aga n'ihu n'ihu n'ihi na azụmaahịa n'akụkụ ụwa niile enyerela ụzọ ha aka. Dika oria ojoo a emeela ka otutu ndi mmadu ghara izere mmekorita ihu na ulo ahia na ulo oru, ndi otu di iche iche na-aza ndi ahia otutu oru dijital. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ B2B
Help chọrọ Nyere Aka na Ndị Azụmahịa na-ege ntị? Malite Ebe a
Sọnde, Febụwarị 7, 2021 Sọnde, Febụwarị 7, 2021 Wendy Nchoputa
Injinia abughi oru dika o si ele uwa anya. Maka ndị na-ere ahịa, ịtụle ọnọdụ a mgbe ị na-agwa ndị na-ege ntị na teknụzụ nwere nghọta nke ọma nwere ike ịbụ ihe dị iche n'etiti ịbụ ndị ejiri akpọrọ ihe na ileghara anya. Ndị ọkà mmụta sayensị na ndị injinia nwere ike ịbụ ndị na-ege ntị siri ike ịgbawa, nke bụ ihe na-akpata State of Marketing to Engineers Report. Maka afọ nke anọ n'ahịrị, TREW Marketing, nke na-elekwasị anya na ahịa na teknụzụ
Itinye AI Ai Iji Wulite Ezigbo Prozụ Ihe Profaịlụ ma Nyefee Ahụmahụ Nke Onwe
Ndị ọchụnta ego na-achọkarị ụzọ iji melite arụmọrụ na arụmọrụ ha. Nke a ga - abụ ihe dị mkpa dị mkpa ka anyị na - aga n'ihu na - agagharị na nsogbu azụmahịa COVID siri ike. N'ụzọ dị mma, ecommerce na-eme nke ọma. N'adịghị ka ụlọ ahịa anụ ahụ, bụ nke mgbochi ọrịa na-efe efe emetụtala nke ukwuu, ahịa dị n'ịntanetị dị elu. N'ime oge ememme 2020, nke na-abụkarị oge ịzụ ahịa ịzụ ahịa kwa afọ, a na-ere ahịa ntanetị n'ịntanetị